ew chigadzirwa mucheche mucheche achikambaira mukobvu wakapfava EVA furo yevana isiri-yekutsvedza kutamba bonde kurongedza imba yekurara kumba vana havagone kukambaira pasi
Nyoro nyoro, kusimba kwakanaka, hapana deformation mushure mekushandisa kwenguva refu, yakanaka kwazvo kusagadzikana,
Zvakafanana nekuwedzera zvekuvhundutsa pasi, kuitira kuti igare yakachengeteka uye isingavhiringidze vavakidzani.
Unobata kusona kukwira bonde
Endesa mwana wako nhanho dzese
Kukwirisa uye kunyorovera kunokwira chimeti, mwana anokambaira akasununguka kune wese mudiki uye kudonha kwese
Vacheche vanogona kurishandisa zviri nyore
Uchishandisa zvinhu zvitsva, hapana hwema hwekunhuhwira, mwana anogona kuongorora nyika zvakanyanya kugadzikana!
Yakapetwa pasi bonde nemashizha pateni, yakajeka magadzirirwo, yakasimba kubata, yakakwira-kuwanda zvinhu, kanoverengeka kekusimbisa, kunakidzwa nekunyaradzwa nekuvimba uye chengetedzo, yakajeka anti-skid pateni, yakachengeteka uye yakavimbiswa.
Inogona kushandiswa mumakamuri ekurara, makamuri ekugara, makamuri evana, bay windows, dzimba dzekugara, fenzi dzevana, balcony, pet pet, nezvimwe.
Mateti edu epasi anotengeswa mukuomerera maererano nehunhu hwekunze uye kuendeswa kune dzimwe nyika, senge: United States, Japan, United Kingdom, Germany, Canada, Italy, Belgium, Denmark, Netherlands, Croatia zvichingodaro.
Chigadzirwa maficha: Chigadzirwa chiri munyoro uye chakasununguka, chiine kugona kuchinjika. Iyo inoumbwa neyakagadzikana uye akapfava matema. Iyo gobvu uye izere nekusimba. Inogona kunyatsobata zvinoitika, kuchengetedza mwana kubva kumabhomba, uye kutarisira kukura kwakanaka kwemwana.
Nyore bhakera giya dhizaini, nyore kukatanura uye kuungana chero nguva, magiya micheto zvakatsvinda, iko kunopinza kwakasimba uye kwakasimba, zviri nyore uye zviri nyore kukatanura, uye haitore nzvimbo;
Ukobvu hwakachengeteka, kutonhora uye kupisa kupisa, inokodzera mwaka mina, ichivharira kupisa kupisa, kusanamatira kune vanhu muzhizha, uye kutonhora uye hunyoro kuputira munguva yechando;
Iyo mbishi zvinhu ndeye yakachengeteka zvinhu, isina-chepfu, isingatsamwisi, ine hutano uye isiri-chepfu, yakasimba tensile simba, yakasimba, uye yadarika akawanda zvitupa kuchengetedza zvakachengeteka hutano hwemhuri;
Isina mvura, isina-proof uye iri nyore kuchenesa. Kunyangwe ari matanga tii, emukaka makwapa, makwapa emvura, muto, zviyo zvemupunga, kana jira nyoro, zvinogona kupukutwa. Yakachena uye hapana masara, uye inogona kushandiswa zvakare, iri nyore uye isina matambudziko;
Kana mwana achidzidzira kufamba uye kusvetuka, anogona kudzivirirwa uye kuderedzwa ruzha, kuitira kuti zvisazokonzere vamwe
Iyo yemashiripiti mat iyo mhuri yese inogona kushandisa, mubereki-mwana, iyoga, kugwinya, kunakidzwa yakanyarara nguva mumasikati;
Inogona kutemwa zvakasununguka, yakachekwa zvakasununguka zvinoenderana nezvaunoda, makona anogonawo kuiswa, akachengeteka uye pasina magumo akafa.
Pashure: Thicken yoga bonde Eva zvinhu varume nevakadzi kugwinya bonde Ruviri-mativi solid solid goo mat
Zvadaro: Yevana gobvu rinosona furo uriri bonde rinokambaira mwana mudiki mumba mevacheche imba isiri-inotsvedza pasi Eva kudzivirirwa kwezvakatipoteredza
Eva Foam Matiles
Eva Tamba Mats
Furo Kutamba Mat Matiles
Kupindirana Play Mat Puzzle Furo Mats
YeMwana WePuzzle Yekurovedza Ridza Mat
Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, AMP Mobile Floor Furo Rakajeka, Floor Puzzle Mat Cushion, Floor Mat Puzzle, Floor Furo Rakajeka Mat, Floor Rakajeka, Yepasi Yekunze Exercise Mat, Zvese Zvigadzirwa